ဒီဘ၀စည်းမျဉ်းလေးတွေက ယူတို့ကိုထက်မြက်တဲ့မိန်းမသားတစ်ယောက်ဖြစ်စေမှာ…🌻 – Trend.com.mm
လူတိုင်းမှာ အားသာတဲ့အချိန် အားနည်းတဲ့အချိန်တွေဆိုတာရှိတာပါပဲ။တစ်ခါတစ်လေ ဘ၀ကိုလက်လျော့ချင်လောက်တဲ့အချိန်ဆိုတာ ရှိသလို တစ်ခါတစ်လေတော့လည်း စိတ်ဓာတ်တက်ကြွဆုံးဆိုတဲ့အချိန်တွေကြုံဖူးကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ အခုပြောပြမယ့် စည်းမျဉ်းလေးတွေ၊အချက်လေးတွေသာ
သိထားမယ်ဆိုရင် မိန်းမသားဆိုပေမဲ့လည်း ထက်မြက်ကြံ့ခိုင်တဲ့မိန်းမသားအဖြစ် ဘ၀ကိုခွန်အားအပြည့်ရင်ဆိုင်နိုင်သွားမှာပါ။ဘယ်လိုစည်းမျဉ်းလေးတွေလဲ…?
Rule 1 *ဘယ်လိုအချိန်မျိုး၊ဘယ်လိုအနေအထားမျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ချစ်ပါ
တစ်ခြားသူတွေက ကိုယ့်အရည်အချင်းတွေ၊ကိုယ့်လုပ်နိုင်စွမ်းအပေါ်သံသယ၀င်နေရင်တောင် ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုတော့ အယုံအကြည်မကင်းမဲ့သင့်ပါဘူးနော်။အမှားတစ်ခုလုပ်မိရုံနဲ့ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်အပြစ်တင်နေမယ့်အစား အဲ့ဒီအမှားကနေ လေ့လာသင်ယူပြီးနောက်ထပ်မမှားအောင်ဂရုစိုက်ပါ
Rule2*တစ်ခြားသူတွေအပေါ် ယုံကြည်ပြီး မမှီခိုပါနဲ့
ကိုယ်နဲ့အရင်းနှီးဆုံးတွေအပေါ်ယုံကြည်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေချရတဲ့အခါမျိုး၊ဘ၀နဲ့ပတ်သက်လို့ရပ်တည်ချက်တွေဆုံးဖြတ်ရတော့အခါမျိုးမှာ သူတို့ရဲ့ပြောစကားထက် ကိုယ်တိုင်ပဲဆုံးဖြတ်ရမှာပါ။ဘယ်သူမှ အစားဝင်ဆုံးဖြတ်မပေးပါဘူး။တစ်ခြားသူတွေက ဘာလုပ်ပါ၊ညာလုပ်ပါလို့ပြောနေရတဲ့သူမဟုတ်ပဲ မေးခွန်းအားလုံးအတွက် ကိုယ့်မှာအဖြေရှိနေပြီးသားလူပဲဖြစ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလွဲလုိ့ ယုံကြည်ရတဲ့သူဆိုတာ ရှာမှရှားပါပဲ။
Rule3*ကိုယ့်မသိစိတ်ကိုယုံကြည်ပါ
မသိစိတ်က ကိုယ့်ရဲ့အကောင်းဆုံးသူငယ်ချင်းပါပဲ။ဘယ်အရာက ကိုယ့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲ၊ဘယ်အရာကတော့ဖြင့်မှားယွင်းနိုင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ့်ရဲ့မသိစိတ်နဲ့သိစိတ်ပေါင်းပြီးအဖြေထုတ်ရတာပါ။ကိုယ့်စိတ်ကိုနားထောင်ဖို့ကြိုးစားပါ။သင့်အတွက်မှန်ကန်တဲ့အဖြေကို ပေးပါလိမ့်မယ်။
Rule4* စိတ်ထဲကမပါဘူးဆိုရင်တောင် ကြင်နာပြပါ
တစ်ခြားသူတွေကို ကြင်နာဖို့၊ချစ်ခင်ဖို့စိတ်မပါဘူးဆိုရင်တောင် နောက်ဆုံးအချိန်ထိ ကြင်နာပါ။ထက်မြက်တဲ့မိန်းမသားတစ်ယောက်ဟာ စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တာတွေ၊နာကျင်တာတွေကို ရင်ထဲမှာပဲထားပြီး တစ်ခြားသူတွေကို တည်ငြိမ်စွာနဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။ကိုယ့်အပေါ်တစ်ယောက်ယောက်ကဒေါသထွက်အောင်ပြောလို့ ဒေါသထွက်ပြလိုက်ရင် ဒါကိုယ့်အရှုံးပါပဲ။သူတို့က ကိုယ်ဒေါသထွက်တာမြင်ချင်ကြတာလေ။အဲဒီတော့ ဘယ်အရာက သူတို့အပေါ်တုံ့ပြန်တာဖြစ်မလဲ သေချာစဉ်းစားတုံ့ပြန်ပါ။
Rule5* အခြေအနေအချိန်အခါတွေထည့်မတွက်ပဲ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် ခွန်အားဖြစ်ပေးပါ
တစ်ယောက်ယောက်ကိုအားပေးနှစ်သိမ့်တယ်။တစ်ယောက်ယောက်အတွက်ခွန်အားဖြစ်ပေးတယ်ဆိုတာ အခြေအနေအချိန်အခါ မကန့်သတ်ထားသင့်ပါဘူး။ကိုယ်ချစ်တဲ့လူတွေ၊ကိုယ်ဂရုစိုက်ရတဲ့လူတွေအတွက် ကိုယ်က အမြဲအားဖြစ်ပေးသင့်ပါတယ်။ဒါက ကိုယ်သူတို့ထက် သန်မာတယ်၊ခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာ ပြနေတာပါပဲ။
Rule6* ၀မ်းနည်းမှုတွေကို မြိုသိပ်မထားပါနဲ့
ငိုချလိုက်ဖို့ကို မကြောက်ပါနဲ့။ငိုတာဟာ အားနည်းချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါဘူး။ငိုကြွေးလိုက်တာက ကိုယ်ပြန်ပြီးရပ်တည်ဖို့အားယူလိုက်တဲ့သဘောပါပဲ။လူတိုင်းဘ၀မှာသာယာတဲ့နေ့ရက်ကြီးပဲမရှိပါဘူး။အခက်အခဲတွေ၊အဆင်မပြေမှုတွေဆိုတာ ဒီနေ့မဟုတ် နောက်တစ်နေ့ကြုံရမှာပါ။ဒါကြောင့် ငိုချင်ရင်ငိုချလိုက်ပါ။နောက်တစ်နေ့ထိမသယ်ပါနဲ့။
Rule 7* ဘယ်အရာမဆို ပြုလုပ်ခါနီးတိုင်း ငါလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်ထားပါ
အဆင်ပြေပါ့မလား၊ရပါ့မလားတွေးနေတာက ကျရှုံးသူတွေရဲ့ အလုပ်ပါ။ကိုယ်ဘာကိုပဲလုပ်လုပ် လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် ငါဒီအရာကိုလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်ချက်အပြည့်ထားပြီးလုပ်ပါ။ထက်မြက်ကြံ့ခိုင်တဲ့မိန်းမသားဆိုတာ အလွယ်တကူအရှုံးမပေးလိုက်ပါဘူး။တစ်ယောက်ယောက်ကရပ်လို့ပြောရင်တောင် အဲ့ဒါက ကိုယ့်ပန်းတိုင်ကိုအမြန်ရောက်စေတဲ့ စကားပဲလို့မှတ်ထားပါ။သင်လုပ်နိုင်တာထက် ပိုပြီးလုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာ မမေ့ပါနဲ့။
ဒီနေ့ကစပြီး ဒီလိုယုံကြည်ချက်လေးထည့်ပြီးလုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် ရလဒ်ကောင်းလေးတွေပိုင်ဆိုင်လာမှာပါလို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
လူတိုငျးမှာ အားသာတဲ့အခြိနျ အားနညျးတဲ့အခြိနျတှဆေိုတာရှိတာပါပဲ။တဈခါတဈလေ ဘဝကိုလကျလြော့ခငျြလောကျတဲ့အခြိနျဆိုတာ ရှိသလို တဈခါတဈလတေော့လညျး စိတျဓာတျတကျကွှဆုံးဆိုတဲ့အခြိနျတှကွေုံဖူးကွမှာပါ။ဒါပမေဲ့ အခုပွောပွမယျ့ စညျးမဉျြးလေးတှေ၊အခကျြလေးတှသော
သိထားမယျဆိုရငျ မိနျးမသားဆိုပမေဲ့လညျး ထကျမွကျကွံ့ခိုငျတဲ့မိနျးမသားအဖွဈ ဘဝကိုခှနျအားအပွညျ့ရငျဆိုငျနိုငျသှားမှာပါ။ဘယျလိုစညျးမဉျြးလေးတှလေဲ…?
Rule 1 *ဘယျလိုအခြိနျမြိုး၊ဘယျလိုအနအေထားမြိုးမှာပဲဖွဈဖွဈ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျခဈြပါ
တဈခွားသူတှကေ ကိုယျ့အရညျအခငျြးတှေ၊ကိုယျ့လုပျနိုငျစှမျးအပျေါသံသယဝငျနရေငျတောငျ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုတော့ အယုံအကွညျမကငျးမဲ့သငျ့ပါဘူးနျော။အမှားတဈခုလုပျမိရုံနဲ့ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျအပွဈတငျနမေယျ့အစား အဲ့ဒီအမှားကနေ လလေ့ာသငျယူပွီးနောကျထပျမမှားအောငျဂရုစိုကျပါ
Rule2*တဈခွားသူတှအေပျေါ ယုံကွညျပွီး မမှီခိုပါနဲ့
ကိုယျနဲ့အရငျးနှီးဆုံးတှအေပျေါယုံကွညျထားတယျ။ဒါပမေဲ့ ဆုံးဖွတျခကျြတှခေရြတဲ့အခါမြိုး၊ဘဝနဲ့ပတျသကျလို့ရပျတညျခကျြတှဆေုံးဖွတျရတော့အခါမြိုးမှာ သူတို့ရဲ့ပွောစကားထကျ ကိုယျတိုငျပဲဆုံးဖွတျရမှာပါ။ဘယျသူမှ အစားဝငျဆုံးဖွတျမပေးပါဘူး။တဈခွားသူတှကေ ဘာလုပျပါ၊ညာလုပျပါလို့ပွောနရေတဲ့သူမဟုတျပဲ မေးခှနျးအားလုံးအတှကျ ကိုယျ့မှာအဖွရှေိနပွေီးသားလူပဲဖွဈဖို့ကွိုးစားပါ။ကိုယျကိုယျတိုငျကလှဲလို့ ယုံကွညျရတဲ့သူဆိုတာ ရှာမှရှားပါပဲ။
Rule3*ကိုယျ့မသိစိတျကိုယုံကွညျပါ
မသိစိတျက ကိုယျ့ရဲ့အကောငျးဆုံးသူငယျခငျြးပါပဲ။ဘယျအရာက ကိုယျ့အတှကျအကောငျးဆုံးဖွဈမလဲ၊ဘယျအရာကတော့ဖွငျ့မှားယှငျးနိုငျတယျဆိုတာ ကိုယျ့ရဲ့မသိစိတျနဲ့သိစိတျပေါငျးပွီးအဖွထေုတျရတာပါ။ကိုယျ့စိတျကိုနားထောငျဖို့ကွိုးစားပါ။သငျ့အတှကျမှနျကနျတဲ့အဖွကေို ပေးပါလိမျ့မယျ။
Rule4* စိတျထဲကမပါဘူးဆိုရငျတောငျ ကွငျနာပါ
တဈခွားသူတှကေို ကွငျနာဖို့၊ခဈြခငျဖို့စိတျမပါဘူးဆိုရငျတောငျ နောကျဆုံးအခြိနျထိ ကွငျနာပါ။ထကျမွကျတဲ့မိနျးမသားတဈယောကျဟာ စိတျဆိုးဒေါသထှကျတာတှေ၊နာကငျြတာတှကေို ရငျထဲမှာပဲထားပွီး တဈခွားသူတှကေို တညျငွိမျစှာနဲ့တုံ့ပွနျပွောဆိုပါတယျ။ကိုယျ့အပျေါတဈယောကျယောကျကဒေါသထှကျအောငျပွောလို့ ဒေါသထှကျပွလိုကျရငျ ဒါကိုယျ့အရှုံးပါပဲ။သူတို့က ကိုယျဒေါသထှကျတာမွငျခငျြကွတာလေ။အဲဒီတော့ ဘယျအရာက သူတို့အပျေါတုံ့ပွနျတာဖွဈမလဲ သခြောစဉျးစားတုံ့ပွနျပါ။
Rule5* အခွအေနအေခြိနျအခါတှထေညျ့မတှကျပဲ ကိုယျခဈြတဲ့သူတှအေတှကျ ခှနျအားဖွဈပေးပါ
တဈယောကျယောကျကိုအားပေးနှဈသိမျ့တယျ။တဈယောကျယောကျအတှကျခှနျအားဖွဈပေးတယျဆိုတာ အခွအေနအေခြိနျအခါ မကနျ့သတျထားသငျ့ပါဘူး။ကိုယျခဈြတဲ့လူတှေ၊ကိုယျဂရုစိုကျရတဲ့လူတှအေတှကျ ကိုယျက အမွဲအားဖွဈပေးသငျ့ပါတယျ။ဒါက ကိုယျသူတို့ထကျ သနျမာတယျ၊ခှနျအားရှိတယျဆိုတာ ပွနတောပါပဲ။
Rule6* ဝမျးနညျးမှုတှကေို မွိုသိပျမထားပါနဲ့
ငိုခလြိုကျဖို့ကို မကွောကျပါနဲ့။ငိုတာဟာ အားနညျးခကျြတဈခုမဟုတျပါဘူး။ငိုကွှေးလိုကျတာက ကိုယျပွနျပွီးရပျတညျဖို့အားယူလိုကျတဲ့သဘောပါပဲ။လူတိုငျးဘဝမှာသာယာတဲ့နရေ့ကျကွီးပဲမရှိပါဘူး။အခကျအခဲတှေ၊အဆငျမပွမှေုတှဆေိုတာ ဒီနမေ့ဟုတျ နောကျတဈနကွေုံ့ရမှာပါ။ဒါကွောငျ့ ငိုခငျြရငျငိုခလြိုကျပါ။နောကျတဈနထေိ့မသယျပါနဲ့။
Rule 7* ဘယျအရာမဆို ပွုလုပျခါနီးတိုငျး ငါလုပျနိုငျတယျဆိုတဲ့ယုံကွညျခကျြထားပါ
အဆငျပွပေါ့မလား၊ရပါ့မလားတှေးနတောက ကရြှုံးသူတှရေဲ့ အလုပျပါ။ကိုယျဘာကိုပဲလုပျလုပျ လုပျတော့မယျဆိုရငျ ငါဒီအရာကိုလုပျနိုငျတယျဆိုတဲ့စိတျလေးနဲ့ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျယုံကွညျခကျြအပွညျ့ထားပွီးလုပျပါ။ထကျမွကျကွံ့ခိုငျတဲ့မိနျးမသားဆိုတာ အလှယျတကူအရှုံးမပေးလိုကျပါဘူး။တဈယောကျယောကျကရပျလို့ပွောရငျတောငျ အဲ့ဒါက ကိုယျ့ပနျးတိုငျကိုအမွနျရောကျစတေဲ့ စကားပဲလို့မှတျထားပါ။သငျလုပျနိုငျတာထကျ ပိုပွီးလုပျနိုငျတယျဆိုတာ မမပေ့ါနဲ့။
ဒီနကေ့စပွီး ဒီလိုယုံကွညျခကျြလေးထညျ့ပွီးလုပျပေးမယျဆိုရငျ ရလဒျကောငျးလေးတှပေိုငျဆိုငျလာမှာပါလို့ အကွံပွုတိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။